40 Mfm vavaka manondro fitomboana ara-panahy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 40 Mfm vavaka manasongadina fitomboana ara-panahy
Tahaka ny zazakely rehetra mila mitombo foana mba ho tonga olon-dehibe, ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mila mihalehibe ara-panahy mba ho kristiana matotra. Misy fomba roa izay itomboan'ny kristiana iray dia ny: Ny teny sy ny vavaka. Androany dia nanangona teboka vavaka 40 mfm izahay mba hampivoarana ara-panahy. Ity takelaka vavaka mfm ity dia avy amin'ny Dr Olukoya avy amin'ny tendrombohitra afo sy minisitera fahagagana. Ny vavaka dia fomba azo antoka hananganana hozatra ara-panahy. Rehefa mivavaka isika dia manome toerana hiasan'ny fanahy masina antsika sy ao amintsika. Ao amin'ny Lioka 18: 1 Jesosy dia nampianatra antsika hivavaka lalandava fa tsy ho reraka.
Ireo mfm vavaka fomba satria ny fitomboana ara-panahy dia hanome hery anao hitombo ara-panahy. Hanamafy ny fiainam-bavaka ataonao izany ary hampivoatra ny fivoaranao ara-panahy. Tadidio fa mitaky vavaka hialana amin'ny fakam-panahy sy ireo fakam-panahy mandresy, arakaraka ny itomboan'ny fahamatorana ara-panahy. Miaina fahalemena eo amin'ny fiainanao kristianina ve ianao? Mivavaha, tsy ampy fahendrena sy fitarihana ve ianao? Mivavaha. Ny vavaka no lakile ahafahana miditra amin'ny fanjakana rehetra. Ny vavaka no fanalahidin'ny fitomboana ara-panahy. Rehefa mivavaka am-bavaka ianao anio dia mahita ny haavon'ny fiainanao Kristiana avo kokoa amin'ny anarana Jesosy.
40 mfm vavaka dia manondro fitomboana ara-panahy.
1. Tompo ô, omeo hery ara-panahy aho mba ho mpankato ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Tompo ô, aoreno amin'ny diako miaraka aminao, tahaka ny olona mahita ny asanao amin'ny fiainako ary mankalaza ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy
3. Tompo ô, amboary amin'ny teninao aho, avelao ny teninao hamoa eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
4. Andriamanitra fiadanana, hamasino amin'ny teninao, fa fahamarinana ny teninao.
5. Ry Raiko Tompo ô, avelao ny vatako, ny fanahiko ary ny fanahiko ho voataona tsy manan-tsiny mandra-pihavin'i Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Avelao aho ho feno, hameno ahy amin'ny fahalalana ny teninao rehefa manarona ny tsofina amin'ny anaran'i Jesosy ny rano.
7. Ry Tompo ô, omeo ahy ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahatakarana ara-panahy mba hahafahako mahatakatra ny teny mafy amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ry Tompo Ray, ampio aho handeha amin'ny lalanao ianao, avelao ny olona hahita an'i Kristy ao amiko isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ray Tompo ô, ataovy mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
10.O Tompo ô, ataovy batisa amin'ny fanahin'ny fifonana aho, ampio ny fiainako am-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy.
11TOMPO ô, ampaherezo ahy mafy ao anatin'ny olona anaty aho amin'ny anaran'i Jesosy.
12.Ry Tompo ô, avelao aho ho feno ny herin'ny fanahinao amin'ny diako miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ry Tompo, avelao hazavaina ny mason'ny fahalalako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo ô, avelao aho hampahery amin'ny herin'ny Fanahy ao anaty ao anaty ao amin'ny anaran'i Jesosy.
15.Ry Ray ô, avelao Kristy hitoetra ao am-poko amin'ny finoana, ary aoka ny fitiavana an'i Kristy ato amiko hamoa amin'ny anaran'i Jesosy.
16.Ry Tompoko, avelao aho hiorina amin'ny fitiavana an'i Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy.
17Ry Tompo, aoka ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra aho.
18Azao, ampio aho hahatakatra ny halavany sy ny halavany ary ny halalin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy ary ampandehoy ahy izany fitiavana izany isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy
19.Tsy hanana lalana malalaka ny tenin'ny Tompo ary hankalazaina amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Ry Tompon'ny fiadanana, omeo fiadanam-po aho amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy.
21.Izao no tokony homena ahy hampahafantarana ny zava-miafina ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy.
22.Oh, Tompo ô, lavorary izay tsy ampy amin'ny fiainako, avelao haseho hatrany ny herinao amin'ny fahalemeko.
23.Oh, Tompo ô, tanteraho ny drafitra sy ny tanjonao.
24.Oh, Tompo ô, ataovy ahy ny asanao, tonga lafatra amin'ny asa tsara rehetra.
25.Oh, Tompo ô, ampaherezo ahy ny fahendrena avy any an-danitra amin'ny teny rehetra sy ny fahalalana rehetra.
26.Aoka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
27.Raha Tompoko, atsofohy ato amiko ny otrikarenanao ara-panahy amin'ny teninao (ronono ara-panahy) izay hahasalama ahy ara-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
28.Ry Tompo ô, atsofohy ho ahy ny vitamina ara-panahy izay hampivoatra ny faniriako hianatra ny teninao tsy hampiankin-doha amin'ny anaran'i Jesosy.
29.Fahantra, omeo hanoanana ara-panahy tsy manam-petra ary mangetaheta manenjika anao toy ny pataloha malalako aorian'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy.
30.Manome fitebirebena ara-panahy amiko Andriamanitra hanadio ny fahitako sy hanamafisana ny fahazavany, amin'ny anaran'i Jesosy.
31.Tondraka Andriamanitra, aza mitondra ahy ho amin'ny fakam-panahy, ary afaho amin'ny ratsy rehetra aho amin'ny diako kristiana amin'ny anaran'i Jesosy.
32Ry Andriamanitra, ambarako fa amin'ny diako kristiana dia hahita fahasalamana avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
33. Andriamanitra ô, manome hery ahy tsy ho reraka amin'ny fikatsahako andraikitra masina amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Andriamanitra ô, velomy aho amin'ny hena matanjaka amin'ny teninao mba hitomboana ara-panahy haingana amin'ny anaran'i Jesosy.
35Vonjeo Andriamanitra, ampaherezo ny heriko mba hampandeha ilay hazakazaka napetraka eo anoloako hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Izaho dia mahazo fanosorana sy hery mampahery ao amin'ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Ray ô, avelao ny fitiavan'i Kristy hikotraka ahy tsy ho eo amin'ny tontolo sisa amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Ray, noho ny ampinga finoana, dia esoriko ny fahavalo rehetra nokendry tamin'ny fahavalo tamin'ny anaran'i Jesosy.
39. Nihazakazaka tamin'ny anaran'ny Tompo aho, dia tilikambo mafy ary tsy manana ahiahy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
40.Raha Tompoko, misaotra anao noho ny fanamafisana ny fiainako ara-panahy ho ambony kokoa ny haavon'ny Anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraFifadian-kanina sy vavaka ho famonjena an'i Nizeria
Next lahatsoratra60 mfm vavaka manondro manohitra ny toe-tsaina momba ny tsy fananana
David Ndowa 29 martsa 2019 Amin'ny 8:26 hariva
Tiako ny tenin 'Andriamanitra ary azoko tanteraka
. Ampirisihana hatrany aho hivavaka hatrany amin'ity programa ity.
samson folorunsho 4 jona 2021 Amin'ny 6:14 hariva
tsara sy manavao
70 Ny vavaka fanafahana dia manondro ny herin'ny helo
Vavaka hanoherana ny fisotroana toaka amin'ny nofinofy